Makomo akanaka Tuscany kuvanza ziso-nokukwezva ichi kasitoro pamwe nemamwe akitekicha. Its rechi19 muridzi remakore aida redesign nawo Oriental zvinofurira. Nemamwe mashoko, iye vakamutumidza flair kuti hapana mumwe Italian Castle anogona kuenzaniswa.
Pakuvara rechi10 remakore, Valenzano Castle nderimwe mukuru fairytale nematende achakamira kuItaly. Nhasi zvichiri sezvinoita akanaka uye hombe sezvo zvakaita ipapo. zvisinei, pane kushumira sezvinoita boka revarwi rinorinda, Nhare iyi zvino hotera, wakakwana tenesi matare uye gorofu makosi.
Nokuti zvose evanofarira pakati vafambi, Montegufoni achava inonakidza kuenda. Ndiwo musha yakakurumbira Room pakati Masiki, rine Gino Severini nakisisa Pamifananidzo. Uyezve, rinotsvaka zvachose dzinokatyamadza, uye inzvimbo kuti vose vanogona.
Unoda embed yedu Blog romukova “10 Fairytale nematende In Italy Unofanira Visit” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye chinyorwa asi ndapota, chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/fairytale-castles-italy/- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)